Iclaamin: Bannaanbax ka mug culus midkii hore! | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugaaska Beelaha Mudullood Ugaas Maxamuud Cali Ugaas, oo warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka deggan yahay Muqdisho, ayaa ku dhawaaqay in 28-ka bisha Feberaayo ay bulshada caasimaddu isugu soo bixi doonaan bannaan-bax ka miisaan culus midkii baaqday 19-kii bishaan Jannaayo, kaas oo dib loogu dhigay baaq ka yimid odayaashada dhaqanka beelaha Hawiye.
“Akhayaarta hoggaamineysay isku dibbaridka bannaanbaxa dastuuriga ah, kaas oo ay ku muujinayeen dareenkooda, laakiin ixtiraam ay noo hayaan dartiis inaga noogu tanaasulay, kadibna aan dib u ballannay, maantana aan isku nimid, waxaana isku afgarannay in 28-ka February la isugu yimaado bannaanbax nabadeed oo weyn oo kii hore u abaabulnaa ka culus oo umaddu dareekeda si xor ah ugu muujiso”. Ayuu yiri Ugaas Maxamuud.
Ugaaska Beelaha Mudullood, wuxuu hormuud u ahaa odayaal dhaqan oo hore u baajiyay bannaanbax xooggan oo 13-kii bishaan la filayay inuu ka dhaco caasimadda, hayeeshee, uu ka dhashay is qabqabsi amni, kadib markii maamulka Gobolka Banaadir oo Farmaajo ka amar qaata hor istaageen, taas oo sababtay in dhaqanku soo dhex-galo.
Keydmedia Online, ayaa ogaatay in kulan Sabtigii dhex maray odayaasha dhaqanka iyo maamulka Gobolka Banaadir, uu ku soo dhamaday is af-garawaa, kadib markii si dhaqanka ka baxsan uu cuqaasha ula hadlay, guddoomiye ku xigeynka amniga gobolka, oo ah shaqsiga Farmaajo u soo dhiibay farriinta maamulka Finish ku diidaay mudaharaadka.
Tallaabaaas, waxa ay horseedday in odayaasha degaanku isku aragti ka noqdaan, bannaan-baxa, cabursanaantana laga saaro gobolka shanta sano u af-duuban Farmaajo iyo kooxdiisa, isla-markaana uu Ugaaska Beelaha Mudullood Ugaas Maxamuud Cali Ugaas, oo dhaqanka ka wakiil ah iclaamiyo, isku soo baxa.
Farmaajo, wuxuu hore u hor istaagay isku-day ay mucaaradku ku muujinayeen aragtidooda, sido kale, wuxuu isku hor gudbay xuquuqdii dastuuriga ahayd ee shacabka Muqdisho u lahaayeen in dareenkooda cabirran, waxaa la sugayaa habka uu ku wajaho mudaharaadka ay markaan odayashu horkacayaan.